ओली सरकारले फेरी गर्यो यस्तो नया निर्णय, जनतालाई घाटा हुन्छ कि फाइदा ? — Sanchar Kendra
१बाइडेनले आज अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ लिदैँ, कार्यक्रममा ट्रम्प नजाने
२चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडाैं महानगरका ६९ पूर्वाधार सम्पन्न
३भारतले अनुदानमा दिने कोरोना खोप आज नेपाल आइपुग्ने
४ट्रम्पको कार्यकाल आजदेखि सकिदै, ह्वाइट हाउसबाट निस्किएपछि नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी
५महिला राष्ट्रिय लिग फुटबल आजदेखि सुरु हुँदै, उद्घाटनमा आर्मी र पुलिस भिड्दै
६विदाई सम्बोधनमा ट्रम्पले भने– हामीले थालेको आन्दोलन बल्ल सुरु हुँदैछ
७देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार छु – प्रचण्ड
८ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सीआईबीले बल्ल निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष, बालुवाटारदेखि सितलनिवाससम हलचल
९संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा
१०मेगा बैंक र धादिङ्ग उद्योग वाणिज्य संघबीच सहकार्य
११राडी बजारमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा, सूचनासहित
१२सुनसरीमा माइक्रोबस दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, ८ घाइते
११संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले के दियाे अन्तरिम आदेश ?
१२संसद विघटनबिरुद्धको मुद्धामा आजको सुनुवाइ सकियो
ओली सरकारले फेरी गर्यो यस्तो नया निर्णय, जनतालाई घाटा हुन्छ कि फाइदा ?
काठमाडौं । अब सरकारी प्रयोगशालाहरुले पनि सःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न पाउने भएका छन् । सबै सरकारी ल्याबले सरकारी मापदण्डमा नपरेकाहरुसँग शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि चाहिले भीटीएम, रिएजेन्ट अस्पताल वा ल्याब आफैंले किन्नुपर्नेछ ।
दैनिक परीक्षण गर्ने नमुनाको ५० प्रतिशतसम्म सःशुल्क समावेश गर्न पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि तीन वटा सरकारी ल्याबलाई मात्र सःशुल्क टेष्ट गर्ने अनुमति दिइएको थियो भने अरु निजी ल्याबहरुले सशुल्क परीक्षण गर्दै आएका थिए ।
सरकारले सःशुल्क परीक्षणमा ४ हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने भनेर यसअघि नै तोकेको छ । तर केही सरकारी ल्याबले २ हजार २०० रुपैयाँ परीक्षण शुल्क तोकेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ३००, ललितपुरमा ३८ र भक्तपुरमा ५८ जना गरी जम्मा ३९६ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
यसअघि सोमबार (हिजो) काठमाडौंमा २९३, ललितपुरमा २० र भक्तपुरमा १३ जना गरी जम्मा ३२६ जना संक्रमित थपिएका थिए। यस्तै नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९०२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ४८ हजार १३८ पुगेको छ । नयाँ थपिएका संक्रमित मध्ये ३०७ जना महिला र ५९५ जना पुरुष रहेका छन् । यसअघि सोमबारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४७ हजार २३६ थियो ।
डा गौतमका अनुसार प्रदेश १ का जिल्लाहरुमा इलामका एक जना, उदपयुरका २ जना, ओखलढुंगाका १३ जना, झापाका १६ जना, मोरङका ५१ जना र सुनसरीका ३८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
यस्तै प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा धनुषाका ३३ जना, बाराका १२ जना, पर्साका १४ जना, महोत्तरीका ४ जना, रौतहटका ८ जना, सप्तरीका १८ जना, सर्लाहीका ६ जना र सिरहका ४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
फुटबल संघका अध्यक्ष गुरुङलाई उच्च अदालतले ताेक्यो १० दिन कैद सजाय, यस्ताे छ कसुर